Mpanoratra sary ROSA: mpitantana tsotra amin'ny fandoroana sary ISO mankany USB | Avy amin'ny Linux
Mpanoratra sary ROSA: mpitantana tsotra amin'ny fandoroana sary ISO mankany USB
Eo amin'izao rehetra izao Fampiharana GNU / Linux misy safidy maro karazana, amin'ny lafiny fitaovana na Mpitantana fandoroana rakitra sary ISO mankany amin'ny kapila USB. Ary androany, anjaran'ny antso kely fantatra Mpanoratra sary an'i Rosa.
Mpanoratra sary an'i Rosa dia rindranasa kely manaitra izay noforonin'ny vondrona rosiana na fikambanana antsoina RussianLab, izay manana ny azy koa GNU / Linux Distro antso Desktop ROSA. Izay no antony, namboarina manokana izy io, ankoatry, hanoratra isan-karazany amin'ny fomba tsotra sy mivantana ISO fisie ao amin'ny USB drive, ataovy amin'ny fomba mahomby sy mahomby miaraka amin'ireo rakitra ISO an'ny Distro Rosiana voalaza.
Tsara homarihina, ho an'ireo tsy dia manam-pahalalana momba ny voalaza GNU / Linux Distro Rosiana Desktop ROSA fa fizarana ho an'ireo mpankafy ny tontolon'ny GNU / Linux izy io ary mandeha amin'izao fotoana izao ho an'ilay kinova ROSA Desktop Fresh R10. Version teraka ho famotsorana faharoa miorina amin'ny sehatra mavokely2016.1, izay manana fanohanana mahazatra 2 taona sy fanohanana maharitra 2 taona, ary ny fanavaozana ny fiarovana azy ireo dia homena hatramin'ny faran'ny taona 2020, hoy ny mpamolavola azy.
Amin'izao fotoana izao, ROSA Desktop Fresh R10 Izy io dia manana tontolo birao ofisialy roa (Plasma 5, KDE 4) ary tontolon'ny birao mifanentana roa miaraka amin'ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina (LXQt, Gnome 3). Ary farany, raha mila fanazavana fanampiny momba an'io GNU / Linux Distro azonao atao ny mitsidika ny rohy ofisialy azy amin'ireto manaraka ireto rohy avy amin'ny wiki-ny, na ity avy amin'ny orinasam-pampandrosoana Linux Rosiana nantsoina LLC NTC IT ROSA.
1 Mpanoratra sary ROSA
1.2 Ahoana no iasany?
1.3 Mety amin'ny fizarana hafa ve izany?
Mpanoratra sary ROSA
Raha ny momba ny fangatahana ataontsika ato amin'ity lahatsoratra ity, izany hoe, Mpanoratra sary ROSA ary araky ny anao tranokala ofisialy, mitovy:
Tonga mialoha napetraka ao amin'ny kinova farany misy an'ny ROSA Desktop Fresh R10
Azo apetraka amin'ny hafa Rafitra miasa GNU / Linux, ankoatra izany Windows sy Mac OS X, mampiasa fisie binary (azo ampiharina) miaraka amin'ireto habe manaraka ireto:
Linux 32-bit (5,2 Mb)
Linux 64-bit (5,1 Mb)
Azo alaina ny kaody loharano loharano, amin'ireto manaraka ireto Tahiry ABF.
Toy ny MX-Linux Distro sy ny fampiharana azy (misy azy) "MX Build Live-USB" (MX Live USB Maker) ho voarakitra an-tsoratra soa aman-tsara ao amin'ny a USB drive, la Distro ROSA Desktop Mila fampiharana manokana ho an'ity tanjona ity izy, satria manana rafitra hybrid.
Midika izany fa, Desktop ROSA misy lohatenin'ny Sary ISO, ary koa ny latabatra fizarazarana kapila fampiasa amin'ny kapila mafy sy kapila. Amin'izany fomba izany dia mila manoratra azy ao amin'ny kapila mangirana bitwise ny fisie ISO tsy misy olana. Toy ny, raha misy GNU / Linux Distro ny fitaovana fibaikoana baiko nantsoina hoe "Dd". Na izany aza, ny fampiasana an'io fitaovana io dia mitaky fahaiza-manao vitsivitsy ary fitandremana be dia be mba tsy hampidirina ny disika diso.
Mety amin'ny fizarana hafa ve izany?
Ireo mpamorona ny fitaovana dia maneho fa miankina amin'ny GNU / Linux Distro nofidian'ny mpampiasa. Saingy mametra izy ireo, izany raha hoy ny fisie an'ny Sary ISO amin'ny GNU / Linux Distros sasany dia azo soratana amin'ny a kapila (USB Drive) mampiasa ny baiko "dd" na fitaovana hafa mitovy amin'izany izay manao kopia kely, ka eny, Mpanoratra sary ROSA azo ampiasaina hanao toy izany koa.
Raha, ny mifanohitra amin'izay, hoy ny fisie an'ny Sary ISO mitaky fitaovana mandroso kokoa, izay mampisaraka ny kapila tselatra, mamolavola azy, mandika ny angon-drakitra ho toy ny andiana rakitra, ankoatry ny fizotrany manokana, koa tsia, Mpanoratra sary ROSA tsy hanampy izany.
Mba hijerena ireo fitaovana ilaina hafa amin'ity faritra ity, dia ampirisihinay hamaky ny lahatsoratray teo aloha momba io lohahevitra io:
Mpitantana fandraketana sary disk amin'ny fitaovana USB
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ity rindrambaiko madinidinika antsoina hoe ity «ROSA Image Writer», izay ahafahantsika manoratra isan-karazany mora sy mivantana ISO fisie ao amin'ny USB drive, indrindra ireo izay misy ny Rosiana GNU / Linux Distro antso «ROSA Desktop», izay mpamorona ny fampiharana voalaza; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mpanoratra sary ROSA: mpitantana tsotra amin'ny fandoroana sary ISO mankany USB
Sandboxie: fandefasana ny rindranasa Windows ho loharano misokatra
Apple sy Google Team Up ary mandefa ny fitaovana fanaraha-maso COVID-19 iraisan'ny besinimaro Mety ho fahataperan'ity fiainana manokana ity ve izany?